Ambongadiny Chandelier PC-8253 zava-kanto eran-tany chandelier mpiorina chandelier tsotra mpamokatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier PC-8253 zavakanto mpihira aretin-tsaina chandelier tsotra chandelier
Fitaovana: vy electroplating + vera kristaly
Loko: Ny volamena tsy misy fangarony. Mainty / varahina
Size: savaivony 60/80 / 100cm (namboarina)
Fandefasana endrika mpamorona glamorous ao anaty toerana misy anao miaraka amin'ny Hermitage S Chandelier. Raha tokony ho ny vongan-drazana nentin-drazana, ny nickature vita vita amin'ny nickel dia mampiseho endrika fitaratra izay taratry ny hazavana toy ny kristaly glasy mamirapiratra. Izy io dia mamorona hazavana mamirapiratra amin'ny atiny rehetra izay haingoiny.
zavakanto zavakanto manokana
Teo aloha: Chandelier PC311 haingon-trano Nordic fanaingoana chandelier injeniera kristaly chandelier
Manaraka: Chandelier PC060 Light chandelier vy mihaja
Jiro rindrina33764-2 Jiro jiro kristaly ao amin'ny lapa
Ranon-jiro SPWS-FL009 Chandelier marevaka ...
Jiro amin'ny rindrina SPWS-W0013 Tena izy, tsara tarehy ary ...
Jiro kristaly lehibe 0004
Jiro amin'ny rindrina33803-2W Jiro eran'ny endriny eropeana
Ny jiro amin'ny tany SPWS-FL005 Ny gol mitsangana mihaja ...